Madaxweynaha Galmudug ‘Xaaf’ oo faah-faahiyay khilaafka xooggan ee kala dhaxeeya DF Somaliya | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxweynaha Galmudug ‘Xaaf’ oo faah-faahiyay khilaafka xooggan ee kala dhaxeeya DF Somaliya
Madaxweynaha Galmudug ‘Xaaf’ oo faah-faahiyay khilaafka xooggan ee kala dhaxeeya DF Somaliya
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Ducaale Geelle (Xaaf)
Gaalkacyo (Halqaran.com) – Axmed Ducaale Geelle (Xaaf), Madaxweynaha Galmudug ayaa waxaa uu ka hadlay khilaafka xilligan soo kala dhexgalay isaga iyo Dowladda Federaalka, ee ku aadan geedi-socodka doorashada Galmudug.
Madaxweynaha ayaa wuxuu sheegay in Dowladda Somaliya ay ka baxday heshiiskii ay wada gaareen, ee ahaa inay isla wadaan dhismaha maamulka cusub, balse uu heshiiskaasi ka fuli waayay dhanka dowladda.
“Wax kasta oo jiray ayaga ayaa fulin waayay, waana ka baxeen, maxaa yeelay waxay ahayd inaan shaqada wada wadno, inaanu ka wada tashano, inaan sida wax loo qabanayo isla ogaano, kulli way ka bayreen. Kulligood waxay ka dhigeen Maloboli Villa Somalia.” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynaha oo la hadlay VOA, waxna laga weydiiyay waxa uu ka dhigan yahay Guddiga Doorashada ee uu magacaabay ayaa wuxuu yiri “Wuxuu ka dhigan yahay kii hore ma jiro, maadaama aan kii hore jirin, waa in mid jiraa soo maaha?”
Madaxweynaha oo la weydiiyay sababta ay u joojiyeen Guddiga Farsamada ee Wasaaradda Arirmaha Gudaha Somaliya soo magacawday ayaa yiri “Kaa waan joojinay, guddi Villa Somalia laga leeyahay weeye.”
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in Xubnaha Guddiga Farsamada ee shaqada ka wada Magaalada Dhuusamareeb, ay yihiin shaqaale Madaxtooyada Somaliya ka tirsan.
“Waa shaqaale Villa Somalia ka shaqeeyo weeye. Boqolkiiba sideetan (80%) waa shaqaale ka mida Villa Somalia.” Ayuu yiri Axmed Ducaale Geelle (Xaaf), Madaxweynaha Galmudug.
Su’aal ahayd haddii labada guddi ka wada shaqeeyan arrimaha doorashada, halka ay Galmudug ku dambeen doonto ayaa tilmaamay inay Galmudug meel wanaagsan ku dambeen doonto, waa haddii ay faraha kala baxdo dowladda.
“Galmudug wax fiican bay ku dambeenaysaa, haddii Dowladda Federaalka faraha kala baxdo, haddii kalena waxaan ka baqaynaa dhacaya.” Ayuu yiri Madaxweynaha Maamulka Galmudug.
Maxaa dhacaya oo la weydiiyay ayuu yiri “Hadda dadkii dhan way qaylinayan, beelihii oo dhan baa qaylinaya, cid walbaa qaylinaysa, odayaashii saxiixe-yaasha oo dhan baa bannaanka la dhigay, kuwo hor lahaa la keensaday, waxaasina ma shaqaynayan.”
Mar uu ka jawaabayay labaatanka xubnood ee Ahlu Sunna laga siiyay Baarlamaanka Galmudug inuu wax ogyahay iyo inuu Ahlu Sunna ku koobnaa ayaa wuxuu yiri “Ahlu Sunna ayuu ku koobnaa, laakiin anaga waxba kama qabno waxaasi. Waxoo dhan waxaa nooga daran lixdan iyo sagaalka haray jeebkey ku jiraan, way samaysan yihiin, haddaa la rabaa in odayaasha laga saxiixo. Waxaan ka hortageynana waxaas ka mida.”
Yaa watoo faraha ku wata xubnaha kale ee Baarlamaanka Galmudug ee aan weli la soo bandhigin, oo la weydiiyay ayaa wuxuu iftiimiyay inay wadato Dowladda Federaalka.
Doorashada Galmudug ee lagu wado inay ka qabsoomto Xarunta Gobolka Galgaduud ee Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa hareeyay khilaaf xoogan, oo muddooyinkii ugu dambeysay soo jiitamaayay.
Villa Somalia ayaa inta badan lagu eedeeyaa mid ka masuul ah khilaafka wiiqay habsami socodka doorashada Galmudug, sababo ku aadan iyadoo uu ujeedkeedu yahay, sidii ay hoggaan iyada taageersan uga hawlgelin lahaa Gobolada Dhexe.
Axmed Ducaale Geelle
Khilaafka isaga iyo Dowladda Somaliya